SomaliTalk.com » Wax wadahadal ah kama dhaxeeyo ONLF iyo Itoobiya(gudoomiyaha jwxo).
Wax wadahadal ah kama dhaxeeyo ONLF iyo Itoobiya(gudoomiyaha jwxo).
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Tuesday, May 4, 2010 // Jawaabaha waa la xiray
Xoogga dalka Ogadenya oo dagaala isdaba Joog ah kuqaaday Ciidamada itoobiya.
Ururka Hooyooyinka Ogadenya ee Minnesota oo soo gaba gabeeyay Shirkoodii.
Ciidanka Gumaysiga oo Magaalada Dhagax buur Shacabka Dhib ugu Gaystay.
Magaalada Godey oo bandow lagu soo rogay maqribka kadib ilaa subaxii.
Hooyo ay ciidanka gumaysigu ku mariyeen Godey gaadhi Milatari halkaana ku dhimatay
Barnaamij:Waa maxay xidhiidhka ka dhaxeeya gumaysiga,jahliga iyo saboolnimada.
================== Warkii oo faahfaahsan ===================
Wuxuu maal mahan waday maamulka gumaysiga adisababa warar aan sal iyo raad toona lahayn oo ah in ay JWXO wadahada kula jirto gumaysiga ithiopia
Waxaana dacaayadaas iyo been abuurkaas ku wehliya kooxo u adeega gumaysiga oo habab kaladugadisan bulshada ku dhexjooga
Dacaayada han raqiiska ah oo ay jwxo marar hore beenisay ayaa waxaa waxba kamajiraan ku tilmaamay gud Jwxo adm.Mohamed Omar Osmaan
Dagaalada lagaga Xoraynayo wadanka Ogadenya Gumaysiga Madaw ee Abasiiniya ayaa sixawli ah uga socda Wadanka Ogadenya, C.X.O. ayaa weerar Qorshaysan ku Qaaday Ciidamo Gumaysi oo kusugnaa duleedka Yoocaale, waxayna Ciidanka Geesiyiinta ee X.O. gabi ahaanba Cagta mariyeen Ciidankii Wayaanaha oo kala Firxaday kadib markay u adkaysan waayeen Xabadda kulul ee CXO. Waxaa halkaa loogu gaystay Khasaare xoogle Ciidankii Wayaanaha oo la Xaqiijiyay inay Xerada kaga Carareen 20 Askari bakhtigooda.
Karinka & Gol-Howleey oo Magaalada Dhaxabuur 15 km u jira.ayaa waxaa weerar kuqaaday CXO Maxaysato katirsan ciidamada Gumaysiga Ethiopia oo watay Dhidid dhawrka Hawaarin
sida ay wararku sheegayaan ciidamada gumaysiga & dabadhoonka Hawaarin loo yaqaan ayaa Deegaankaas u tagay in ay dadka beeraleeyda ah ee meelahaas degan soo xidh-xidhaan xoolana ka soo boobaan, waxaana la sheegayaa in ay Askarta cadaowga & Dabaqoodhigoodu mudo 4 maalmood ah ay shacabka halkaas ku dhibayeen, waxaana lawariyey inay Dabeen Nin aanna wali helin Magaciisa saddexan oo ay mayd ahaan uga tageen balse illaahayt kabadbaadiyey dilkaas dabitanka ah, sidoo kale waxay Ciidamada Nacabka ahi ka qasheen Dadka Xoolo aad u badan.
CWXO oo had iyo goorba utaagan difaaca iyo xoraynta shacabka Ogaadenya, ayaa ku ekeeyay weerar qorshaysan,waxaana halkaas ka dhacay dagaal faraha loogaga gubtay xabada iyo daryaanka hubka la isku adeegsadey ayaa laga maqlayey Magaalada Dhagaxbuur.
Ciidankii gumaysiga & dhidid dhawrkoodii ayaa loogaystay Jab iyo halaag waxaana laxaqiijinayaa in ay gumaysiga halkaas lagaga dilay inta bakhtigooda la arkay 20 dhaawucuna intaas kabadanyahay.
Asbuucan dhexdiisii Waxaa shir balaadhan oo siwanaagsan loo soo abaabulay in mudo ahna laga shintirinayay isugu yimid Ururka Hooyooyinka Ogadenya ee ku dhaqan gobalka Minnesota iyo nawaaxigeeda ee dalka maraykanka, shirkan oo lagu qabtay Hoolka shirarka ee Sabathani community Center ayaa ahaa mid ay si way uga soo qayb galeen hooyinka Ogadenya ee kunool gobolka minesota ee dalkaasi maraykanka,
Gababadii Shirka ayaa Ururuka dhalinta Ogadenya ee North America ay kusoo bandhigeen Bandhig Faneed Heer Sare ah waxaanu shirku kudhamaaday jawi aad u wanaagsan
Wararka ka imaanaya Magaalada Dhagaxbuur ayaa sheegaya inay maalmahan ay sii siyaaday dhibaatada ay ku hayaan Guumaysigu Shacabka Magaalada Dhagaxbuur, Wararku waxay intaa ku darayaan in saddexdii habeen ee u dambaysay ay Ciidmada Guumaysiga ee jooga magaaladaasi dhawr qof ay siyaabo kala duwan ugu dhex dileen badhtamaha magaalada,.
Si kastaba ha ahaatee Dilka ay Ciidamada Guumaysigu ka wadaa meelaha ay joogaan ee ay Shacabku ku nool yihiin sida Dhagaxbuur & dhamaan gobalada Ogaadeenya ayaa noqotay mid ay caadaysteen Tigreeggu, isla markaana qofkay doonaan intay habeenimadii la baxaan ay maalinimada xigta ama dhawr maalmood kaddib maydkiisa soo dhiga badhtamaha magaalada,
Ciidanka Wayaanaha oo laba Nin oo midi Darawal yahay kudhaawacay Gaari Gudaha Magaalada Jigjiga.
Magaalada Jigjiga wararka laga helayo ayaa sheegaya in habeen hore Ciidamada Tigreeggu Rasaas ku fureen Baabuur waday Alaabo raashin kamidyahay oo urarnayd dad shacab ah
Baabuurkan ayaa xilligay Tigreeggu xabadaynayeen soo galayay magaalada isagoo ka yimid dhanka Wadada Jinacsaney.
Sida ay ku waramayaan dadkii ka ag dhawaa meesha lagu xabadeeyay Baabuurkan ayaa sheegay inay maqlayeen Rasaas xooggan iyo Baabuurka Alaabta waday oo ay caydhsanayaan dhawr Askari oo watay Gaadhi qabaal ah, halkaas oo Askarta gumaysiga Ethiopia markii dambe Rasaas xooggan ku fureen Baabuurkii. halkaasna ku dhaawaceen wadihii Baabuurka iyo hal qof oo dhinaca dambe Buurka fuushanaa.
Magaalada Godey ee Xarunta Gobolka Shabeele ayay Ciidamada Cabudhiska ujooga Ogadenya kusoo rogeen bandaw xilliyada habeenkii ah, Bandawgan ayaa sida lagusoo waramayo bilaabma 6:00 Maqribnimo isagoo ku eg ilaa waabariga, Ciidanka Gumaysigu waxay Bandawgan kusoo rogeen dhammaan Gaadiidka iyo dadka magaalada iyadoo lagu amray inay dadku xilli hore u hoydaan guryahooda iyo goobaha ay habeenkii baryayaan.
Lama oga sabab cad oo ka damabaysa Bandawgan lagu soo rogay magaalada xilliyada habeenkii ah balse wararka qaar oo aanu ka helayno ilo wareedadayada ku sugan magaalada ayaa sheegaya in Bandawgan ay kadambayso Cabsi wayn oo laga qabo C.X.O. oo soofadhiistay Kaabiga Magaalada Godey,
Dadka ku nool Magaalada Godey ayaa Dhib wayni kasoo gaadhay Bandawgan habeenkii lagu soo rogay magaalada, iyadoo dad badan uu kajoojiyay shaqooyin koodii iyo Dhaq dhaqaaqoodii Fiidnimo, waxayna Dadku kuqasban yihiin inaya Casar dheer xaroodaan si ay naftooda uga badbaadiyaan dhibaatada ciidamada gumaysiga.
Ciidamada Guumaysiga & Boolis ku sheega magaalada Godey ayaa ka cabsi qaba in Shir Dhagareed ay soo abaabuleen Saraakisha Wayaanhu uu qabsoomi waayo, kadib markay ka war heleen Ciidamada Jwxo, oo duleedka Magaaladaas Fadhiisimo kasamaystay.
Dhinacakale Xukuumada Wayaanaha ayaa ku eedaysay wadanka Erateria inuu wado Falal kadhan ah Doorashada Itopia, Erateria waxay soo Abaabulaysaa Kooxo Mucaarada oo ay kamid yihiin,O.N.L.F. iyo O.L.F. oo doonaya inay Nabad Galyadaro kaseemeeyaan Magaalada Addis Abbaba, iyo wadankoo dhan ayuu yidhi Ninka kumagacaaban Taliyaha waxa ay u Yaqaanaan Policeka Faderalka.
Qoraalkan ayaa lagu sheegay in Ciidamo kusoo Tababartay Dalka Erateria ay si joogtaa ugasoo gudbaan Xuduudaha Somaliya Gaar ahaan Puntland, Iyo Waqoyi Galbeed, waxaana Qorshahoodu yahay inay Carqaladeeyaan Doorashada 4aad ee Itopia oo haatan si haboon ololaheedu u socdo,ayaa lagu yidhi Qoraalkan kasoobaxay Taliska Policeka Wayaanaha.
jaaliyada ogadeniya ee konfur afrika oo kaqayb gashay xuska maalinta shaqaalaha ee gobolka eastern cape ee wadanka K/A
xaafiiska jaaliyada ogadeniya ee koonfur afrika ayaa wafti heer sare ah oo isugu jirta gudida JOKA iyo xubno ururka ANCYL ay ka amba baxeen si,ay uga Qaybgalaan munaasabada maalinta shaqaalaha Aduunka oo si wayn looga xusay magaalad port Elizabeth, munasabada ayaa kadhacday garoon kuyaala township,ka swedi oo sida badan lagu qabto kulamada waawayn sida xiliyada doorasha
munaasabadan oo siwayn loosoo abaabulay ayaa waxaa joogay madaxwaynihii hore ee wadankaas kgalema motlanthe, oo Xilka hayay intii u dhaxaysay Tabo mbeki, iyo Jocap zuma, oo ahayd mudo 6 bilood ah hadana ah madaxwayne kuxigeenka wadanka ahna gudoomiye ku xigeenka ururka ANC.
madaxwaynaha ayaa qudbadiisa kadib masraxa kasoo dagay halkaas oo ay kula kulmeen waftidii JOKA uguna gudbiyeen fariin qaali ah
madaxda wadanka konfur afrika ayaa ah madax aad ugu dabacsan dadka afrikaanka ah jecelna in ay ogaadaan xaalad kasta, gaar ahaan waxay neceb yihin gumaysiga iyo dacatiga. kadib markay ogaadeen xoriyadu waxay tahay. jaaliyada ogaadeniya ee koonfur afrika ayaa wada dhaqdhaqaaq xoogan oo lagu soo bandhigayo dhibaatada qarsoon ee laga xidhay aduunka ee kajirta wadanka ogadeniya
waftiga oo watay calanka qaranka ogadeniya ayaa waxa kaqaday xubno sarsare halkaas o ay codsadeen in lagaga qaado sawir ayagoo amaanay calanka quruxda badan, waxay kaxumaadeen in uusan ahayn mid xoriyadiisii gaadhay balse wuxuu xusuusiyay xiligii gumaysiga waxayna ku booruyeen in ayna kanoogin dadaalkooda wax kasta oo adagna waa loo maraa xoriyada
ilaalada madaxwaynaha ayaa aad loo adkeeyay isla markaana waxaa lasoo dhaweeyay waftida jaaliyada oo fursad qaali ah u helay in ay lakulmaan madaxwaynaha
Inta badan Umadaha Dunidu waxay soo mareen Duruufo isu eg oo ay kamuuqdeen Qalaf sanaan iyo Mugdi badan kuwaasi oo hadheeyay Mustaqbalka iyo Rajadii Nololeed ee ay lahaayeen, marka aad milicsatao Taariikhda majiro Shakhsi, Qoys, Qabiil, Qoomiyad, ama Qaran la kowsaday Horumar iyo Badhaadhe balse waxay kamidaysan yihiin inay lasoo darseen dhibaatooyin ay keeneen Jahliga iyo Saboolnimada oo ah Dabeeco soojireena oo aadamaha lajaanqaada kabixistooduna ay tahay Mid ku xidhan Dadaalka Aadmigu layimaado.
Balse Su,aal taagan ayaa waxay tahay Maxay kala yihiin ama waa maxay Farqiga u dhexeeya, Jahilga, Saboolnimada, iyo Gumaysigu?.
Waxaa siidaba taala Su,aal kale oo ah Mawaxaa keena Gumaysiga, Jahliga iyo Saboolnimada,? Mise Jahliga iyo Saboolnimadu iyagaa keena Gumaysiga?
Walaw ay Su,aalahaas Jawaabtoodu Adag tahay in lagu deg dego, hadana aan meel gaaban kaasiiyo Su,aalahan Jawaabtoodee Ruux kaste oo Aadame ah waxaa uu dhashaa isaga oo Xor ah shakhsiyaad ahaan oo aanay Jirin Cid sheegan karta oo aan ka,ahayn Allihii Abuuray, markaan saa kuleeyahay ogow in ruuxa dhashaayi yahay mid aan wax ba ka ogayn Dunidan uu kusoo kordhay waxa kajira iyo waxay tahay toona sidaa awgeed ruuxaasi waa Jaahil dhaba.
Jawaabta kale ayaa iyana taa lamida oo marka ruuxa Cusubi dunida kusoo biirayo majiraan wuxuu layimaado waxaana uusoo dhashaa isaga oo Qaawan kuna duuduuban kaliya Mandheerta Hooyada dhalaysa, sidaa awgeed isna waa Sabool.
Hadaba Masuuliyada ruuxaa Jahliga iyo Saboolnimada kudhashay ma,ahan mid dadka u dhaxaysa balse waxaa uu illaahay dusha kasaaray labada Waalid ee dhalay.
Waxaa halkaa kaaga cad in erayadan sadexda ah ay yihiin kuwa is huwan oo inta mid jiro kan kalena jirayo Jawaabta oo koobana waxay tahay Jahliga iyo Saboolnimadu waxa ay ku Dul nool yihiin Aadmiga Gumaysiguna waxaa uu kusii Dul Nool yahay Jahliga iyo Saboolnimda.
Markaad fiiriso Umadihii lasoo Gumaystay iyo kuwa wali kujira Gacanta Gumaysiga waxaad Ogaanaysaa in Gumaystuhu ugusoo gabado Jahliga Umada uu rabo inuu Gumaysto waxaanu kusoo galaa kolba shaadhka uu is leeyahay waad ku dhex gali kartaa inta uu helayo sirta Ummadaas.
Macnaha faaladeenu ma,aha marka Ummad Gumaysi qabsado inay inta faraha kalaabato tiraahdo gumaysigu Jahliga ayuu kugu arkaye horta wax baro, ama u tabco hadhow ayaad usoo jeedsan doontaa Gumaysiga e, waayo isaga ayaanba kuu ogolaanayn inaad wax barato ama aad latimaado dhaq dhaqaaq tabac.
Markaad dib u raacdo taariikhda Wadamada maanta Xorta ah ee usoo halgamay Gobanimadooda ma arkaysid Wadan inta Aqoon yahankiisa iyoMaal qabeenkiisu meel isugu yimaadeen iyagoo isku aragti ah ka arin sadeen say uga bixi lahaayeen Gumaysiga sidaana kubilaabay Halgan Gobanimo doon oo waqti dheer socda.
Waxaan saa uleeyahay Gumaysiga ayaan maraba raali kanoqon karin wax kahor imaanaya masaalixda ama danaha uu kaleeyahay Ummadaa uu Gumaysto,
Bal u fiirso Ummadaha uusoo maray Gumaysigii ugu Cimri dheeraa sida AL Jeeriya Hindiya Maraykanka Midab Takoorkii Koonfur Africa iyo Ummadihii lasoo Gumaystay oo dhan.
Fikirka waxaa kena Shaqsiyaad Dareen koodu Horeeyo Kadibna waxay ugudbiyaan dareenkkoda Bulshada inteeda kale ogow manoqdaan Shaqsiyaadkaasi kuwo ay soo wada dhoweeyaan dadka Bulshadii ay u istaageen soo dhicinta Xaqooda waxaana Suura gal ah in inbadan oo kamida Bulshadu u aragto shar wadayaal kana raacdo Gumaysiga .
Ummaduhu Ugu Horayn waxay u istaageen inay iska saaraan Gumaysiga markay iska saaraana waxay usoo jeesanayeen say uga bixi lahaayeen Jahliga Faqriga iyo dhibaatooyinkii kale ee uu Gumaysigu reebay.
Ogow Jahliga iyo Faqrigu waa Labada aaladood ee ugu Xoog badan ee uu gumysigu ku adeegto Dadkooda taasina waxay kuu cadaynaysaa inay yihiin sadex kala daran.
Hadaba Su,aasha iswaydiinta Mudan ayaa waxay tahay see looga bixi karaa?
Inta aadan Guda galin Jawaabta, Xusuusnow inta Gumaysi Jiro inaadan kabixi karin Labada Maado ee kala ah Jahliga iyo Saboolnimada, xisaabtana kudarso inaadan isku mar kawada bixi karin sadexda maado ee kuwada haysta.
Prof. I am Luwis oo ah Khabiir ku Takhasusay Arimaha Geeska Africa waxna ka qora ayaa Faala uu Qoray Ciwaan uga dhigay Umadaha Geeska Africa wali mayna Xoroobin, isaga oo ula jeeday waxaa ka arimiya kuwii uu Gumaysigu Ababiyay waxna uusoo Baray, sidaa awgeed waxay qorayaan Ardadu waxaa Macalinkoodu u yeedhiyo oo Gumaystihii ah ayuu kudaray Qormadiisa Khabiirkaasi.
Hadaba sida kaliya ee looga bixi karo ayaa ah in loo kala hormariyo say u kala mudan yihiin oo ah in marka hore lala dagaalamo Gumaysiga iyo kuwa u sahlaya in gumaystuhu wax sii gumaysto,
Marka Labaadna labilaabo in lala dagaalamo Jahliga oo ah ilaalada koobaad ee Gumaysiga ku xidhan yahay, marka sadexaadna loo jeedsado soo afjarida Saboolnimada oo ah tan Gumaysiga ugoysa Cardka Umada uu Gumaysan rabo, Maah maah Soomaaliyeed ayaa ahayd Oodo dhacameed say u kala sareeyaan ayaa lookala qaadaa, Ujeedku waxaa weeye Gumaysigu waa Hoyga Xumaanta wax kastana isaga ayaa kamudan in laga hormariyo sidii looga bixi lahaa.
Radio Xoriyo 03 May 2010
Maxamuud Sh. Cali
Raadioxoriyo@yahoo.com or Radioxorio@yahoo.com
Radio Xoriyo waxaad ka dhegaysan kartaan maalmaha
Isniinta & Jimcaha 5 :30 – 6:00 PM waqtiga afrikada bari
F Mawjada 19 Meter Band
FInternetka : www.Ogaden.com & www.Ogadennet.com
FPhone ka : +16417153800 Access Code 5126014 #
FYoutubka : www.Youtube.com/user/Radioxoriyo
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: xorriyo